Ny famolavolana tranonkala natao namboarina - Mpanamboatra an-tapitrisany
Tranonkala namboarina. Miara-miasa amin'ny indostria rehetra izahay.
Fandefasana haingana ary dia mahazo ihany koa
Namboarina sy endrika miavaka
Fizarana maimaimpoana maimaim-poana
Emails maimaim-poana (5 imailaka 5 miaraka amin'ny habaka XNUMX GB tsirairay)
Ny fidirana amin'ny tontonana fanaraha-maso
Ny anay manokana
Inona no ataontsika Packages
Ny momba antsika manokana
Ireo mpanolo-tena nohamasinina sy ny rahona
Tetikasa maherin'ny 1000+ no vita ary mbola manisa…
Ny ataontsika amin'ny fampandrosoana tranonkala voatsangana
Mazava ny votoatiny
$200.00 / Taona
Mpanamboatra kaonty amin'ny famolavolana
01 - pejy 7
Mpanaingo ambaratonga 3
2 Safidy volavola
Fandefasana amin'ny SE malaza
Emails maimaim-poana (5 mail Ids / 5 GB space)
$400.00 / Taona
07 - pejy 12
3 Safidy volavola
Fandefasana fototra amin'ny SE malaza
$600.00 / volana
12 - pejy 20
Mpanaingo ambaratonga 4
5 Safidy volavola
Sary misy sonia
$ Andao hiresaka asa manokana
Seriviana natokana sy vahaolana vahaolana amin'ny rahona
Volavola & fampandrosoanav
• Fanadihadihana ilaina: Ny fahazoana ny tanjon'ny mpanjifa, ny mpihaino kinendry, ny fangatahana amin'ny antsipiriany ary manangona fampahalalana betsaka araka izay azontsika angonina.
• Ny sata ho an'ny tetikasa: Ny sata tetikasa dia mamintina ny vaovao natambatra sy nifanekena tamin'ny teboka teo aloha. Ireo antontan-taratasy ireo dia mazàna ary tsy be loatra ara-teknika, ary ampiasaina ho fanondroana manerana ny tetikasa.
• Sarintany an-tranonkala: nomanina ny sarintany amin'ny antsipiriany momba ny tranonkala izay any aoriana any amin'ireo mpitari-tolona, ​​mpampiasa farany mety ho very ao anatin'ny rafitra na mila fampahalalana haingana.
• Ireo fifanarahana izay mamaritra ny anjara toerana, ny zon'ny mpamorona ary ny teboka. Ity dia singa manan-danja amin'ny tahirin-kevitra ary tokony ahitàna ny fe-potoana fandoavam-bola, famaranana ny tetik'asa, fehezan-teny famaranana, fametrahana ny zon'ny mpamorona ary fandaharam-potoana. Tandremo ny manarona ny tenanao amin'ity tahirin-kevitra ity, fa ho fohy sy mahomby.
Ny dingana famoronana raha ny tokony ho izy dia ny handrosoana miaraka amin'ireo fampahalalana nofaritana tamin'ny sehatra drafitra. Ireo mpitaona lehibe dia rakitra tranokala voatahiry ary manan-danja indrindra, fanehoana fahitana. Vantany vao vita ny famolavolana endrika dia namboarina ilay tetikasa na kely aza ny fahazoana azy, fa noho ny tsy fisian'ny atiny sy ny endri-javatra manokana.
Slice and code valid XHTML / CSS Fotoana fanodinana. Tendreo ny Photoshop fanesoana farany, ary soraty ny code HTML sy CSS ho an'ny famolavolana fototra. Ny singa mifampitaona sy ny jQuery dia avy eo: ho avy izao, aoreno fotsiny ny sary eo amin'ny efijery, ary ho azo antoka fa hanamarina ny fehezan-dalàna rehetra alohan'ny handehanana.
Kaody firy isaky ny karazany pejy
Mamolaha ary andramana ny toetra manokana sy fifaneraserana manokana: tiantsika ny hikarakara izany alohan'ny hanampian'ny votoatiny static satria ny tranokala izao dia manome toeram-piasana somary madio sy tsy voapetraka.
Manandrama ary manamarina ireo rohy sy fiasa: averinay indray izao ilay tranonkala mampiasa mpiandraikitra ny rakitrao ho mpitari-dalana, mandehandeha isaky ny pejy tokana noforonina, izay ahitàna, ny zava-drehetra avy amin'ny pejy an-trano ka hatrany amin'ny pejy fanamafisana ny fandefasana mba hahazoana antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetra sy isika tsy nanana na inona na inona hita maso sy mandeha amin'ny tokony ho izy.
Ny tanjona lehibe amin'ny dingana fampidirana dia ny fanomanana ny tetikasa hijerena ny daholobe. Mitaky fanodinana farany ireo singa famolavolana, fitsapana lalina ny fifandraisana sy ny endri-javatra ary tena zava-dehibe, fandinihana ny traikefan'ny mpampiasa.
Polishing: Mamantatra ny ampahany amin'ilay tetikasa azo hatsaraina ny ekipanay.
Famindrana amin'ny mpizara mivantana: Ny famerenantsika farany ny tetikasa mivantana dia misy ankehitriny.
Fanadinana: Ankehitriny, andeha ataonay ny fitaovana farany momba ny diagnostika farany misy: fitaovana fanaraha-maso, mpanamarin-kaody, mpanara-maso ara-pahasalamana amin'ny tranokala, kitapom-batana tapaka, sns.
Tambajotra cross-browser sy Responsiveness: Hamarinin'ny ekipanay amin'ny tetik'asa marobe toa ny IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari, iPhone, BlackBerry, sns.
Ny serivisinay IT dia atolotra ho an'ny mpandraharaha isan-karazany amin'ny karazany sy ny habe rehetra. Manompo izahay, ankoatra ny indostria manaraka:
Rohy ilaina amin'ny famolavolana tranonkala manokana